"အဖြေရှာမရသော ရေမျောကမ်းတင်ခြေထောက်ပြတ်များအမှုတွဲ" - YOYARLAY Digital Media and News
ပင်လယ်ကမ်းခြေတွေကိုအလည်သွားကြတိုင်း ကမ်းစပ်သဲသောင်ပြင်တွေမှာ ခရုလေးတွေ၊ ကမာခွံလေးတွေ ရှာကြရတာ အရသာတစ်မျိုးပါ။ ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲ သင် ကမ်းခြေသွားကာမှ သောင်ပြင်မှာ လှပတဲ့ ခရုလေးတွေကိုမတွေ့ဘဲ ခြေထောက်အပြတ်တွေကိုသာတွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင် သင်ဘယ်လိုများ ခံစားရမှာပါလိမ့်?
ဗြိတိသျှကိုလံဘီယာက ကမ်းခြေတစ်ခုပေါ်မှာဆိုရင်တော့ သင်ဟာ ဒီလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့ ကြုံကြိုက်ကောင်း ကြုံကြိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဗြိတိသျှကိုလံဘီယန်တွေအတွက် ဒီဖြစ်ရပ်ဆိုးကြီး ခြောက်လှန့်နေခဲ့တာဟာ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်လွန်ခဲ့ပါပြီ။
၂၀၀၇ ခုနှစ် ဂျက်ဒီးဒီးယားကျွန်း (Jedediah Island) မှာ ခြေထောက်ပြတ်တစ်ဘက်ကို တွေ့ကြရာက နောက်ထပ် နောက်ထပ် ခြေထောက်အပြတ်တွေကို ဆက်တွေ့လိုက်တာ ၂၀၁၈ မှာတင် (၁၄) ခုမြောက် ခြေထောက်ပြတ်ကို တွေ့ခဲ့ကြရပြီးပါပြီ။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်ရဲ့ သြဂုတ် တစ်လတည်းမှာတင် ညာခြေထောက်ပြတ် (၂) ဘက်ကို တွေ့ခဲ့ကြရတာပါ။ ခြေထောက်ပြတ်တစ်ဘက်တွေ့တယ်ဆိုတာတောင် အတော်ကြီး ထူးဆန်းနေပြီးတဲ့နောက် ခြေထောက်အပြတ်နှစ်ချောင်းကို တွေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေ အတော်ခေါင်းခြောက်ကြရပါပြီ။
တွေ့ရတဲ့ ခြေထောက်တွေမှာ စီးထားတဲ့ဖိနပ်တွေကလည်း ဘရန်းအမျိုးမျိုးက မော်ဒယ်လ်အမျိုးမျိုးပါပဲ
တွေ့ရတဲ့ ခြေထောက်တွေမှာ စီးထားတဲ့ဖိနပ်တွေကလည်း ဘရန်းအမျိုးမျိုးက မော်ဒယ်လ်အမျိုးမျိုးပါပဲ။ အမျိုးသားခြေထောက်တွေလည်းပါသလို အမျိုးသမီး ခြေထောက်တွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဘယ်သူတွေရဲ့ ခြေထောက်တွေများလဲ? အဲဒီရက်ပိုင်းတွေက လူပျောက်နေပါတယ်လို့ တိုင်ချက်ဖွင့်ခံထားရသူတွေရဲ့ ခြေထောက်တွေများလား? ဒါတွေကိုသိရဖို့အတွက် ခြေထောက်နဲ့ ဖိနပ်ပုံတွေကို သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတွေက လူထုကိုထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ မိသားစု၊ အပေါင်းအသင်း၊ မိတ်ဆွေတွေများ မှတ်မိလို မှတ်မိငြားပေါ့…။
ခြေထောက်နဲ့ ဖိနပ်ပုံတွေကို သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတွေက လူထုကိုထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်
အဲဒီထဲမှာမှ တချို့ခြေထောက်တွေကတော့ ပိုင်ရှင်ပေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်ခြေထောက်တွေလဲဆိုတော့၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီမှာ လာတင်နေတဲ့ ခြေထောက်နဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဇွန်လမှာ လာတင်နေတဲ့ ခြေထောက်တွေပါ။ ဒီခြေထောက်နှစ်ဘက်ဟာ လူတစ်ယောက်တည်းရဲ့ ခြေထောက်တွေပါပဲ။ ၂၀၁၁ခုနှစ်မှာ DNA စစ်ဆေးမှုနဲ့ ခြေထောက်ပိုင်ရှင်ကို အဖြေရှာတဲ့အခါမှာတော့ ဒီခြေထောက်တွေရဲ့ ပိုင်ရှင်ဟာ ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာကတည်းက လူပျောက်တိုင်ခံထားရတဲ့သူဖြစ်နေပါတယ်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်က ပျောက်ဆုံးသူရဲ့ ခြေထောက်တွေက ဘာကြောင့် (၄) နှစ်ကြာပြီးမှ ခြေထောက်ချည်းပဲ ပြန်ပေါ်လာရတာလဲ?
နောက် ပိုင်ရှင်မပေါ်တဲ့ ခြေထောက်တွေကရော? ဒီခြေထောက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထွက်လာတဲ့ ခန့်မှန်းချက်တွေကလည်း မနည်းလှပါဘူး။
ဒီအမှုတွဲဟာ ကမ္ဘာမှာတော့ “The Mysterious Case of the Severe Feet” (အဖြေရှာမရသော ခြေထောက်ပြတ်များ”ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ကျော်ကြားပါတယ်
တချို့သော ပညာရှင်တွေကတော့ “ဒါဟာ အဖြတ်ခံထားရတဲ့ ခြေထောက်တွေမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ရေထဲဆင်းပြီး သတ်သေသွားသူတွေ၊ ဒါမှမဟုတ် လေယာဉ်ပျက်ကျမှုတွေမှာ သေဆုံးသွားသူတွေရဲ့ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်မယ်” လို့ ခန့်မှန်းကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုသာဆို အခြားသော ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေကရော ကမ်းခြေမှာလာတင်နေစရာမကောင်းဘူးလား? နောက်ပြီး လာတင်နေတဲ့ ခြေထောက်တွေမှာ စီးထားတဲ့ဖိနပ်တွေထဲမှာ တောင်တက်ဖိနပ်တွေတောင်ပါနေသေးတာဆိုတော့ ဒီသီအိုရီဟာလည်း တကယ့်ဖြစ်ရပ်နဲ့ ဝေးကွာနေပုံပါပဲ။
ဒါဖြင့် ဒါဟာ လူသတ်မှုများ ဖြစ်လေမလား? ရုပ်ရှင်တွေထဲကလို စိတ္တဇလူသတ်သမားတစ်ယောက်က လူတွေဖမ်း၊ သတ်ပြီး ခြေထောက်တွေ ရေထဲများ မျောနေလေသလား?
လက်ရှိအချိန်ထိ ဒီဖြစ်ရပ်ကို စစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပြီး အဖြေကတော့ ခုချိန်ထိ ပေါ်မလာသေးပါဘူး။ ဒီအမှုတွဲဟာ ကမ္ဘာမှာတော့ “The Mysterious Case of the Severe Feet” (အဖြေရှာမရသော ခြေထောက်ပြတ်များ”ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ကျော်ကြားပါတယ်။
ရိုးရာလေးပရိသတ်ကြီးကကော ဒီဖြစ်ရပ်ကို ဘယ်လိုထင်မြင်မိပါသလဲ? အမြင်လေးတွေကို မျှဝေပေးသွားနိုင်ပါတယ်။
Ref: Mental Floss “Mysterious-cases-severed-feet-british-columbia”, Washington Post “a-14th-human-foot-this-one-in-a-hiking-boot-washes-ashore-in-canada”
Previous Previous post: နှစ်ပေါင်း (၁) သိန်းကျော်ကြာ မျိုးတုံးပျောက်ကွယ်ခဲ့တဲ့ ငှက်တစ်မျိုး ပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာ
Next Next post: လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခနှုန်းထားများကို အသစ်ပြင်ဆင်သတ်မှတ်